तपाईको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि उत्तम स्वत: सहयोग पुस्तकहरू वर्तमान साहित्य
जीवनमा यस्ता क्षणहरू हुन्छन् जब हाम्रो दिमाग सबै भन्दा राम्रो हुँदैन, र हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हामी उदासी र निरुत्साहको पासोबाट मुक्त हुँदैनौं। यस कारणका लागि, कहिलेकाँही, उत्तम स्व-मद्दत पुस्तकहरूले पनि हामीलाई केहिमा झुकाउन अनुमति दिन्छ, विश्वासले हामीलाई अगाडि बढ्न बल दिन्छ।
यदि तपाईं आफैंलाई यस्तो अवस्थामा फेला पार्नुभयो र सहयोगको आवश्यक छ भने, हामी आज यो प्रदान गर्न चाहन्छौं उत्तम मार्फत सहयोग पुस्तकहरू जुन तपाईं बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब, सम्झनुहोस् कि ती पुस्तकहरू हुन्, र ती तपाईंलाई फरक तरिकाले सोच्न सक्छन्। तर इच्छाशक्ति तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्कन।
1 स्वयं-सहायता पुस्तकहरू, के तिनीहरू वास्तवमै काम गर्छन्?
2 सबै भन्दा राम्रो स्वयं-सहायता पुस्तकहरू जुन हामी सिफारिस गर्दछौं
2.1 आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् जस्तो तपाईंको जीवन यसमा निर्भर गर्दछ
2.2 NLP को साथ आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्नुहोस्
2.3 Icarus को धोका
2.4 स of्कटको समयमा आफूलाई कसरी हटाउने
2.5 जीवनमा कटु नहुने कला
2.6 सीमाहरू बिना शक्ति
स्वयं-सहायता पुस्तकहरू, के तिनीहरू वास्तवमै काम गर्छन्?
हामी तपाईसँग इमानदार हुन चाहन्छौं। सेल्फ-हेल्प पुस्तकहरू मैन्युअलहरू हुन् जसमा लेखकका शब्दहरू सहित, सहयोग चाहिएको व्यक्तिले के भएको थियो भन्ने कुरामा चिन्तन गर्दछ। किन तपाईं यस अवस्थामा पर्नुभयो र कसरी तपाईं समस्यालाई अधिक पूर्ण समाधानको लागि उद्देश्यपूर्ण रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ।
र यो यो हो कि, जब तपाईं नराम्रो हुनुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि समस्या नकारात्मक, व्यक्तिगत पक्षबाट हेर्नुहुन्छ ... परिस्थिति र समस्या समाधानमा दुबै प्रभाव पार्ने वरपरका कारकहरूलाई ध्यान नदिई। ।
प्रकृति द्वारा, धेरै व्यक्ति नराम्रो सोच्न थाल्छन् जब उनीहरूलाई समस्या छ र त्यसले प्रभावहरूलाई मल्टिफाइड गर्दछ जसको कारण तिनीहरू लत लाग्न सक्ने विकट सर्कलमा बन्द हुन्छन्। यस कारणका लागि, त्यहाँ समयहरू हुन्छन् जब एक व्यक्ति, साथी वा अपरिचितको वाक्यांशले एक चिप सक्रिय गर्दछ जुन तपाईंलाई उर्जा दिन्छ कि तपाईंलाई त्यो नकारात्मक सुस्तबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ र फेरि जीवनको सामना गर्नुपर्दछ।
स्व-सहायता पुस्तकहरूको मामलामा पनि त्यस्तै हुन्छ। लेखकहरूले के खोजिरहेका छन् त्यो हो ती शब्दहरू तपाईंको अस्तित्वमा गहिरो डुब्छन् तपाईंलाई अगाडि बढ्नको लागि ऊर्जा दिन। तिनीहरू राम्रा छैनन्, न त कुनै समस्या आफ्नै समस्या समाधान गर्न गइरहेका छन्। त्यो केवल तपाइँ द्वारा गर्न सकिन्छ। तर तपाईंले आफैलाई यो गर्नको लागि दु: खी महसुस गर्न रोक्नु पर्छ।
र, एक चिनियाँ हितोपदेश भन्छ, "यदि तपाईं दस पटक झर्नुभयो भने, एघार उठ्नुहोस्।" यसको मतलब के हो? कि मानव पर्याप्त शक्तिशाली छ जुन जीवन तपाईलाई जे गर्नबाट पुन: प्राप्ति गर्नका लागि हो। यो कुनै पुस्तक होल्ड गर्ने सवाल होइन; तर तपाईले चाहानु भएको कुराको लागि लड्न। र हो, यसले तपाईंलाई प्रत्येक पटक बढी खर्च गर्न सक्दछ, तर व्यक्तिहरू, पाण्डोरा बक्सको कहानीको रूपमा, कहिले पनि आशा छाड्दैन, यदि यो सानो र सानो हुँदै गइरहेको छ भने पनि।
सबै भन्दा राम्रो स्वयं-सहायता पुस्तकहरू जुन हामी सिफारिस गर्दछौं
यी सबैले भने, हामी यो पनि भन्न सक्दैनौं कि त्यहाँ कुनै स्व-मद्दत पुस्तकहरू छैनन् जुन वास्तवमै काम गर्दछन्। त्यहाँ केहि छन् जो तपाइँलाई सहयोग दिन जाँदैछन्, एक प्रकारको कोचिंगको रूपमा, ताकि तपाइँ समस्याको विश्लेषण गर्नुहोस् र त्यस स्थितिबाट बाहिर निस्कनुहोस्। यसले समस्याको समाधान गर्दैन, तर यसले तपाईलाई बिभिन्न तरिकाले सोच्न बाध्य पार्छ र त्यसले तपाईंलाई नवीनता ल्याउन, सिर्जना गर्न र तपाईलाई नभएको समाधान फेला पार्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ हाम्रो लागि सब भन्दा राम्रो स्वयं-मद्दत पुस्तकहरू कुन हुन्? दिमागमा राख्नुहोस् कि तिनीहरू केवल एउटा चयन मात्र हुन्, र ती सबैले सबै व्यक्तिहरूको लागि काम गर्दैनन्; ती प्रत्येक एक व्यक्तिको प्रकारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर अर्कोको लागि होईन।
आफैलाई प्रेम गर्नुहोस् जस्तो तपाईंको जीवन यसमा निर्भर गर्दछ
आफुलाई जस्तै माया गर्नुहोस् ...
यो पुस्तक द्वारा लेखिएको कम आत्मसम्मान भएकाहरूका लागि कमल रविकान्त सबैभन्दा उपयुक्त हुन्। र यो यो हो कि कहिलेकाँही समाज यति क्रूर छ कि, जो मानिस फरक छन्, तिनीहरुसंग केहि अतिरिक्त किलोग्राम छ किन कि तिनीहरू अधिक बुद्धिमानी छन्, वा कुनै अन्य कारणले गर्दा उनीहरुलाई उनीहरु आउटस्कास्ट जस्तो देखिन्छन्, जब यो गर्नुपर्दैन। त्यो बाटो हुनुहोस्।
यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ जो आफैंलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने, यो पुस्तक तपाईं संग कनेक्ट हुनको लागि उपयुक्त हुन सक्छ र तपाईं यो सोचनुहुन्छ कि केवल चीजले आफैलाई चोट पुर्‍याउँछ भनेर सबैले सोच्दछन्।
NLP को साथ आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्नुहोस्
यसको साथमा तपाईको दिमागलाई रूपान्तरण गर्नुहोस् ...
वेंडी जागो द्वारा लिखित, neurolinguics प्रयोग गर्दछ, यसलाई एक्रोनिम NLP द्वारा पनि चिनिन्छ, मानसिकतामा परिवर्तन स्थापित गर्न। र, जस्तै ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु किन्न "मनाउन" सकिन्छ, तपाई आफैंलाई रूपान्तरण गर्न तपाईको दिमागमा रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा यो एक उत्तम आत्म-मद्दत पुस्तकहरू हो जुन मनोवैज्ञानिकहरू र व्यक्तिगत बृद्धि कोचहरूले सिफारिस गर्छन्।
Icarus को धोका
Icarus को धोका ...
सेठ गोडिन द्वारा लिखित, यो सौदा गर्दछ विश्वास छ कि हामी आफैंमा विश्वास गर्छौं र त्यसले हामीलाई सीमित गर्दछ जब यो बाच्ने जीवनको लागि आउँछ। उदाहरण को लागी, तथ्य यो छ कि तपाइँ यो वा त्यो चीज गर्न सक्नुहुन्न किनकि तपाइँ उपयोगी छैन, वा किनभने तपाइँ सधैं भनिन्छ कि तपाइँ यसको लायक हुनुहुन्न। तपाईं आफैले आफैंलाई रोक्नुहुन्छ र केहि विश्वास गर्नुहुन्छ जुन सत्य हुँदैन।
तसर्थ, पुस्तकले के प्रयास गर्दछ भनेको यो हो कि तपाईंले ती सीमितताहरू उदाose्ग पार्नुभयो जुन तपाईंको जीवनलाई नियन्त्रण गर्दछ र तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्दछ, तपाईंले साकार महसुस गर्नुहुन्छ कि तिनीहरू सहि छन् कि छैनन् भनेर, र यस तरीकाले, अवरोधहरू र सबै कुरा विच्छेद गर्नुहोस् जुन तपाईं आफैंलाई आफै गर्न नदिनुहोस्। तपाईलाई मन पर्ने केहि।
स of्कटको समयमा आफूलाई कसरी हटाउने
कसरी अधिक समय प्राप्त गर्ने ...
शाड हेल्मस्टेटरबाट, वर्तमान समयमा सब भन्दा सफल पुस्तकहरू मध्ये एक। र यो यो हो कि गति बढ्दै, रोजगारहरू हराउँदै गइरहेका छन् र श्रम बजारमा स्थिर तरिकामा हुनु अझ कठिन भएको छ, यो सबै भन्दा राम्रो स्वयं-सहायता पुस्तकहरू हुन सक्छ। तपाईंलाई शक्तिले भर्नुहोस् र ती सes्कटहरूको सामना गर्नुहोस् अधिक सकरात्मक तरीकाले।
जीवनमा कटु नहुने कला
कटु नहुने कला ...
राफेल सन्तन्द्रेयूको यस पुस्तकले तपाईंको आँखा खोल्न खोजेको छ र तपाईंले धेरै भावनात्मक समस्याहरूको कारण देख्नुभएको छ हामीले बाँच्नु पर्ने समाजको गलत विश्वासहरू। अझ बढी के हो भने, उनी चरम उदासीनतामा पुगेका र अगाडि बढ्नको लागि सबैभन्दा ठूलो डरको सामना गर्ने व्यक्तिहरूको वास्तविक अनुभवहरूको साथ आफ्नो पुस्तकको वर्णन गर्दछन्।
सीमाहरू बिना शक्ति
असीमित पावर: The ...
टोनी रबिन्सबाट, यस लेखकले तपाईको दिमागको वास्तविक शक्ति प्रकट गर्दछ, एक जसले तपाईलाई भन्छ कि तपाईले चाहानु भएको सबै कुरा तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले लड्नुभयो भने। समस्या त्यो कहिलेकाहीं हो हामी नराम्रो विचार वा नकारात्मक चीजहरूद्वारा निर्देशित हुन्छौं अन्तमा भ्रम पैदा भयो जुन हामीले हराउनुपर्‍यो, वा चेतना गुमाउनुपर्‍यो। तर यस पुस्तकका शब्दहरूका लागि धन्यबाद, तपाईं न्युरोलingu्ग्निस्टिक प्रोग्रामिंग र भावनात्मक खुफिया प्रयोग गरेर तपाईको दिमागमा चिप परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ।
यो एक उत्तम स्वयं-सहायता पुस्तकहरू हो जुन हार मान्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता पुस्तकहरू
माओ सिडको गीत